रीना थापा डान्स कुइनसंगको छोटो छोटो मिठो मिठो रोमान्टिक कुराकानी | onlineharpal.com
रीना थापा डान्स कुइनसंगको छोटो छोटो मिठो मिठो रोमान्टिक कुराकानी
on: १० बैशाख २०७४, आईतवार १९:४७ In: bignews1, अन्तर्वाता
आदरणीय दर्शक स्रोता आज हामी यस्तो पाहुना लिएर यहाँहरुको समिपमा आएका छौ उहाँ नेपाली मोडलिङ अकसकी चम्किलो तारा, सुन्दर नृत्यको खानी, सुशील र सालिन व्यक्तित्वको धनी एक उदयमान प्रतिभा जसको नाम हो रिना थापा मगर हो आज हामी उनै चर्चित मोडलसंग हाम्रो खबर कोसेली डटकमको सम्बादाताले गरेको छोटो छोटो, मिठो मिठो रमाइलो रोमान्टिक कुराकानी यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दछौ यहाँहरुलाई मन परे लाइक, कम्मेन्ट र सेयर गरिदिन पनि अपिल गर्दछौ।
यहाँलाइ खबर कोसेली डटकममा हार्दिक स्वागत छ।
मानिसको जीवनमा स्वभावले पनि निकै ठुलो प्रभाव पार्छ यहाँलाइ चै आफ्नो स्वभाव कस्तो लाग्छ ?
– त्यो त अब अनुभव गर्नु हुने दर्शक स्रोता लगायत मसंग जो जसले संगत गर्नुहुन्छ उहँहरुलाई नै बढी थाहा हुन्छ।
हुन्छ नि जस्तो कि कोही अलिक जिज्दी स्वभावको हुन्छन , कोहि हट्टीस्वभावको हुन्छन, कोहि नर्मल सिम्पल स्वभावको हुन्छन नि ?
– म नर्मल छु एकदम सिम्पल स्वभावको।
यहँलाइ सबैभन्दा बढी मन पर्ने नृत्य विधा चै कुन हो ?
– मलाइ लोक नृत्य विधा नै बढी मन पर्छ र क्लासिकल।
लोक नृत्य भित्र यहँलाइ मन पर्ने कुन बिधा हो ?
– मलाइ मारुनी एकदमै मन पर्छ।
नृत्य विधा मध्ये सजिलो लाग्ने विधा चै कुन हो ?
-सजिलो लाग्ने विधा त फिल्मी नै हो। फिल्मी टाइपको सङहरु चै अलि इजी हुन्छ जेगरे पनि मतलब हुन्न जस्तै अरु यो लोक नृत्यहरुमा चै यो स्टेप भनेर बाँधेर गरिन्छ तेसैले अलि गारो हुन्छ।
तपाईले थुप्रै खालको नृत्य गरिरहनु भाछ दर्शक स्रोताहरुले देखिरहनु भाछ यहँलाइ गारो लाग्ने नृत्य विधा चै कुन हो ?
मोडलिङ क्षेत्रको तपाईलाइ लाग्ने सकारात्मक पक्ष चै के होला ?
-हरेक क्षेत्रमा हुन्छ सकारात्मक, नकारात्मक भन्ने त, आफुमा पनि भर पर्ने कुरा हो धेरै नै सकारात्मक कुराहरु नै हुन्छ आफुमा भरपर्छ।
त्यस्तो केहि नकारात्मक पक्ष छ ?
– नकारात्मक पक्ष पनि छ। मोडलिङ क्षेत्रमा भिजेका कलाकारहरुलाई अरु क्षेत्रमा भन्दा अलि फरक ब्यबहार हुन्छ।
नेपालको कुन कुन ठाउँ घुम्नु भाछ ?
– नेपालको धेरै ठाउँहरु त घुमेको छैन पश्चिम पनि घुमेछु पूर्व तिर पनि घुमेछु।
कुन ठाउँ ?
– बढी जसो दाङ, सल्यान
तपाई गएको ठाउँ मध्ये मनपर्ने इम्प्रेस परेको ठाउँ कुन हो ?
– मन परेको इम्प्रेस परेको ठाउँ दाङ, त्यहाँको सपोट साथ बढी पाइयो।
यहाँको जीवनमा घटेको अविष्मरणीय क्षण ?
– हिमसम्झौताबाट सुटिङ गर्ने क्रममा म घोडाबाट लडेको थिएँ र सुटिङ नै क्यान्सिल भाको थियो अलिकति नरमाइलो अविष्मरणीय क्षण।
तपाइलाई मनपर्ने आफ्नो अंग मध्ये कुन मन पर्छ ?
– मलाइ मन पर्ने मेरो अंग ओठ।
सुटिङको लागि मेकअप गर्न चै कति समय लाग्छ ?
– लगभग एक घण्टा
मेकअप र पहिरनमा मासिक कति खर्च हुन्छ ?
– त्यो त अब मेकअप म्यानहरु पनि हुनुहुन्छ कुनै बेला अलि धेरै भिडियो गरेको बेला पहिरनमा बढी लाग्ने हुन्छ मेकअपमा त्यति धेरै खर्च हुन्न मेरो पहिरनमा चै अलि कति हुन्छ।
फुर्सदको समयमा एक्लै हुँदा के गर्नु हुन्छ ?
– बढी जसो फेसबुक चलाउछु, फ्यानहरुसंग कुराकानी गर्छु र नायाँ नयाँ भिडियोहरु हेर्छु।
एकान्तमा एक्लै बसेर रुनु भाछ ?
– अँ, पहिलाको पलहरु सम्झेर आफ्नो स्ट्रगल पिरेडको कुराहरु सम्झेर रुइन्छ।
आफ्नो मन परेको मान्छेलाइ दिनमा कति चोटी सम्झिनु हुन्छ ?
– त्यो त हिसाब गर्नै सकिन्न।
बिछोडको पिडा भोग्नु भाछ ?
-खास भोगेको छैन।
मन परेको मान्छेसंग भेट हुँदा पहिलो काम के गर्नु हुन्छ ?
– हेलो, हाइ त्यस्तै त हो नि।
जीवनमा धोका खानु भाछ ?
– खास छैन।
तपाईको नृत्य असाध्यै राम्रो छ डान्सहरु धेरै राम्रो गर्नु हुन्छ लग भग नेपालको चै डान्स कुइन भनेर चिनिनु हुन्छ अहिले फ्यानहरु त थुप्रै होलान कल म्यासेजहरु कतिको आउँछ ?
-कल म्यासेजहरु त आइनै रहन्छ।
प्राय कस्तो खालको आउँछ ?
– प्राय जसो राम्रो खालको आउँछ कसै कसैले मात्रै अलिकति नराम्रो पठाउनु हुन्छ भने अधिकांस राम्रो आउँछ।
राम्रो भन्नाले कस्तो खालको हो ?
– माया गरेर नै जस्तो अगाडी बढ्नु पर्छ हामी छौ साथ दिने सपोट गर्ने अलिकति छोटो पहिरन चै कम लगाउनुहोस् यस्तो यस्तै कुराहरु आउँछ।
नराम्रो भन्न मिल्ने चै कस्तो खालको आउँछ ?
– जो जो चै मसंग लिंकमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई मैले समय नभएर कुरा गर्ने टाइम दिन भने तपाई ठुलो भाको एक दुइटा भिडियो खेल्दै यस्तो गर्ने यस्तै यस्तै कुराहरु आउँछ।
कोहि फ्यानले तपाईलाइ भेट्ने प्रस्ताब राख्नु भाछ ?
– हजुर राख्नु हुन्छ कसै कसैले तर म उहाँको प्रोफाइलहरु हेर्छु उहाँ चै कस्तो व्यक्ति हो उहाँहरुको कस्तो कस्तो क्रियाकलापहरु छ मलाइ असर नपर्ने खालको छ भने त्यस्तो त्यस्तोहरुलाई भेट छु।
भेट्नु भाछ कोइसंग ?
– हजुर भेटेको छु।
मोडलिङ क्षेत्रलाइ अझ समृद्ध बनाउनको लागि के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
– मोडलिङ क्षेत्रलाइ अझ समृद्ध बनाउनको लागि चै स्पेसल त प्रतिभावन व्यक्तिहरु पहिला प्रबेस गर्नु पर्यो। अहिले पछिल्लो समयमा अलि बढीनै कला प्रतिभा नभई प्रवेश गर्नु भाछ उहाँहरुले गर्दा अलिकति खतरापूर्ण पनि भाछ लोक दोहोरिलाइ अलिकति हेरी नसक्नु पनि भाछ। सबैले मिहनत गर्नु पर्छ र सरकारले पनि पहल गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो कुरामा, जुन यो गितसंगीतलाइ चै सरकारी मूल्य र मान्यताबाट अलिकति टाढा राखिएको छ त्यसलाई चै उहाँहरुले अलि बिशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ अनि गितसंगीतको जति पनि संघसंस्थाहरु छ उहाँहरुले पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ।
यहाँको बेस्ट फ्रेन्ड कोहि छ ?
-बेस्ट फ्रेन्ड एकदम क्लोज फ्रेन्ड सबैलाई म मान्दिन सबै जनालाई टाढा पनि राख्दिन ठिक्क सबै जनासंग मिल्छु धेरै हुनुहुन्छ।
कोइ साथीको स्वभावले यहाँलाइ चोट पुगेको छ ?
– हुन्छ कोइ कोइ साथीहरु।
कोइ साथीको स्वभावले सहयोग पनि त पुग्छ नि त्यस्तो छ ?
– एकदमै साथी भनेकै कहिले दुख हुन्छ कहिले सुख हुन्छ दुख परेको बेला कहिले साथीले हेल्प गरि राहुन्छ कहिले हामीले गरिराहुन्छौ कहिले उसको कुराले चित्त दुखि राहुन्छ कहिले हाम्रो कुराले त्यो त भैहाल्छ नि।
यहाँले दर्शक स्रोतहरुलाई अनुरोध गर्दा खेरि कस्तो खालको गित नृत्यहरु हेर्नु पर्छ भनेर सुझाब दिनु हुन्छ ?
– हजुर म लोकगीत, लोकसंस्कृतिहरुलाइ मन पराइ दिनु होस् हेरी दिनुहोस, अलि टिपिकल खालको गीत मन पराइ दिनुहोस अहिले दर्शक स्रोताहरुले पनि त्यस्तै खालको मन पराइ दिनु हुन्छ जुन एकदमै मोर्डन सङहरु छ त्यो बढी रुचाइ रहनु भाछ पछिलो समयमा पहिलाको टिपिकल गीतहरु र हाम्रो लोकसंस्कृतिहरुलाई हामीले जगेर्ना गर्ने छौ त्यसमा हजुरहरुको साथ पहल एकदमै आबस्यक छ हजुरहरुले पनि हामीले गरेका केहि नराम्रा कुराहरुमा कम्मेन्ट गर्न सक्नु हुछ लोकसंस्कृतिलाई हामी आफै जोगाउँ यति सकारात्मक रुपमा भन्न चाहन्छु।
अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौ अन्त्यमा केहि भन्नु छ कि ?
– सर्बप्रथम त खबर कोसेली डटकमलाइ धेरै धेरै धन्यवात मेरो मनको कुराहरु, मेरो दुइ शब्दहरु दर्शक स्रोताहरु माझमा पुर्याउन सहयोग गर्नु भाकोमा, दर्शक स्रोता हरुलाई मनपराई दिनु होला अझ अगाडी आउन हजुरहरुको सधै साथ सहयोग पाइरहुँ यति भन्न चाहन्छु।